राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्यो आर्मी क्लब
काठमाडौँ । ललित स्मृति १८ वर्षमुनि (यु–१८) को राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रवेश गरेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको सेमिफाइनल खेलमा
काठमाडौँ । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०१८ को प्रिक्वार्टरफाइलन समीकरण पूरा भएको छ । मंगलबार सम्पन्न अन्तिम प्रिक्वार्टरफाइनलमा इंग्ल्याण्डले कोलम्बियालाई पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । क्वार्टरफाइलनमा
पुल्चोक स्पोर्टस क्लबका उपाध्यक्ष शाहीले दिए राजिनामा
नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर । पुल्चोक स्पोर्टस क्लबका उपाध्यक्ष सुदिल शाहीले राजिनामा दिनुभएको छ । क्लबको पदाधिकारीहरुको गतिविधिको कारण आफुले राजिनामा दिनुभएको जनाउनुभएको छ । करिब एक दशकदेखि क्लबको हितमा अघि
रोनाल्डो भित्र्याउने युभेन्ट्सको प्रयास
रोम, (एजेन्सी) इटालियन च्याम्पियन युभेन्टेसले रियल मेड्रिडका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भित्र्याउने प्रयास थालेको छ । रोनाल्डो भित्र्याउन युभेन्ट्सले रियललाई १ सय ६ मिलियन पाउण्डको प्रस्ताव राखेको बताइएको छ । रोनाल्डोले
पेरिस, (एजेन्सी) केलियन एमबाप्पे, जसले १९ बर्षको उमेरमा फ्रान्सलाई विश्वकपको क्वाटरफाइनल पु¥याउन अर्जेन्टिनाविरुद्ध दुई गोल गरे । जारी विश्वकपको अन्तिम १६ मा अर्जे्न्टिनालाई ४–३ ले हराएको खेलमा उनले फ्रान्सकातर्फबाट दुई
नेयमारको व्यवहारले निरास
साओ पाओलो, (एजेन्सी) नेयमारले ब्राजिललाई खुशी गरेका छन् । तर उनले पुरै संसारलाई निरास गरे । ब्राजिलको अखबार ग्लोबोको हेडलाइनमा यही लेखिएको छ । यो ती खेलाडीबारेमा लेखेको हो कि
सनसनी खेलमा बेल्जियम विजयी, जापानले इतिहास कोर्न सकेन
मस्को, (एजेन्सी) सनसनी खेलमा एसियाली राष्ट्र जापानलाई पराजित गर्दै बेल्जियम रुसमा जारी विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । एसियाली पावरहाउस जापानसँग २–० ले पछि परेको अवस्थामा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै बेल्जियमले
स्वीडेन २४ वर्षपछि क्वाटरफाइनलमा
मस्को, (एजेन्सी) इमिल फोर्सबर्गको दोस्रो हाफमा भएको एक मात्र गोलको सहयोगमा स्वीडेन जारी विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको नकआउट चरणको खेलमा स्वीडेनले स्वीट्जरल्यान्डलाई १–० गोलअन्तरले हराएको
वर्ष खेल मिनेट गोल एसिस्ट चरण २००६ ४ १२२ १ १ क्वाटरफाइनल २०१० ५ ४५० ० ३ क्वाटरफाइनल २०१४ ७ ६९३ ४ १ उपविजेता (गोल्डेनबल) २०१८ ४ ३६० १ २
वर्ष खेल मिनेट गोल एसिस्ट चरण २००६ ६ ४८४ १ ० सेमिफाइनल २०१० ४ ३६० १ १ अन्तिम १६ २०१४ ३ २७० १ १ समूह चरण २०१८ ४ ३६०
अण्डा फँयाक्नेलाई कार्वाही नगर्ने
सोल, (एजेन्सी) कोरिया फुटबल संघ (केएफए) ले विश्वकप सकाएर घर फर्केको कोरियाली टोलीमाथि अण्डा फँयाक्ने समर्थकविरुद्ध कुनै कार्वाही नगर्ने जनाएको छ । कोरियाली टोली सोमबार सोलमा इन्चोन विमानस्थलमा फोटोका लागि
रुसमा चुम्बन गर्ने बढे
मस्को, (एजेन्सी) रुसमा जारी विश्वकपमा महिला रिपोर्टरहरुलाई चुम्बन गर्ने घटना बढिरहेको छ । ताजा घटनाअनुसार स्पेनकी एक रिपोर्टरलाई दर्शकले चुम्बन गरेका छन् । मारिया गोमेज नामको उक्त महिला रिपोर्टरले खेल
रियलको नेयमार भित्र्याउने प्रयास
मेड्रिड, (एजेन्सी) ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेयमारलाई भित्र्याउन स्पेनिस क्लव रियल मड्रिडले ३ सय १० मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष स्पेनिस क्लव बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ज जर्मन (पिएसजी) गएका
पेनाल्टी सुटआउटबाट जित निकाल्दै इंग्ल्याण्ड क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकप प्रतियोगितामा नकआउट चरण पार गर्दै इंग्ल्याण्ड क्वार्टरफाइनल पुगेको छ । पेनाल्टी सुटआउट मार्फत प्रतिद्वन्दी कोलम्बियालाई ४–३ ले हराउँदै इंग्ल्याण्ड क्वार्टरफाइनल पुगको हो । पहिलो हाफसम्म
१९९४ पछि स्वीडेन क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकपको नकआउट चरणको खेलमा स्विजरल्याण्ड विरुद्ध स्वीडेनले १–० को जित हात पार्दै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । १९९४ को विश्वकपपछि पहिलो पटक क्वार्टरफाइनलमा पुगेको हो ।
स्विजरल्याण्ड विरुद्ध स्वीडेन १–० को अग्रता
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकपमा स्विजरल्याण्ड विरुद्ध स्वीडेनले पहिलो गोल गर्दै १–० गोलको अग्रता लिएको छ । नकआउट चरणको यो खेलमा खेलको ६६ औँ मिनेटमा स्वीडेनका फोर्सबर्गले पहिलो गोल गर्दै
स्वीडेन र स्विजरल्याण्ड बीचको खेल सुरु
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको खेलमा क्वार्टरफाइनलमा पुग्न स्वीडेन र स्विजरल्याण्ड बीचको खेल सुरु भएको छ । रसियाको पिटर्सबर्ग रंगशालामा जारी खेलमा दुबै टोली क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने दाउमा
जापान विश्वकपबाट बाहिरियोे
मस्को । रुसको राजधानी मस्कोमा जारी विश्वकप फुटबलको सोमबारको खेलपछि जापान पनि बाहिरिएको छ । बेल्जियमले जापानलाई ३–२ गोल अन्तरमा पराजित गरेको थियो । मध्यान्तर अघिसम्म जापान र बेल्जियम दुबैले
‘विश्वकप’ विजेताले कति पुरस्कार पाउँछन् ?
एजेन्सी । अहिले आम चासोको विषय बनेको छ ‘विश्वकप’ कसले जित्ला ? रसियामा जारी २१औं संस्करणको ‘विश्वकप’ले कतिलाई अनिँदो बनाउँदै आएको छ । तर, ‘विश्वकप’ विजेता टिमले कति पुरस्कार पाउँछन् त
रुस जित्दा वाग पनि चर्चित
मस्को, (एजेन्सी) रुसमा विश्वकप शुरु हुनु भन्दा अगाडि एक प्रतियोगिता चलाएको थियो । जसको नाम थियो रसियन हटेस्ट वाग (वाइफ एण्ड गर्लफ्रेन्ड) । यानि की फुटबलरका श्रीमती र गर्लफे्रन्ड ।